မနရေလို့ သရေသောခါ...အသလှေတဲ့သူဖွဈဖို့.. - Tameelay
ဒီအရညျအသှေး လေးမြိုးနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ ကုသိုလျပိုငျရှငျဖွဈမှ ကောငျးရာသုဂတိ ရောကျနိုငျမယျ…။
“မနရေလို့ သရေသောခါ..”ဆိုတဲ့ စကားအတိုငျးပေါ့..
မနရေတော့တာကိုပဲ သတေယျပွောတယျ..။ နတောရပျသှားရငျ သတောပဲပေါ့..
အဲ့ဒီတော့ နနေတေုနျးမှာ ခဈြစှဲ မုနျးစှဲ ကငျးတဲ့စိတျနဲ့ နသှေားမယျဆိုရငျ နတောလေး ပွတျသှားတဲ့အခြိနျကတြော့ ခဈြစှဲ မုနျးစှဲကငျးတဲ့ စိတျနဲ့ပွတျသှားမှာပေါ့..
ခဈြစှဲ မုနျးစှဲ ကငျးတဲ့စိတျနဲ့ အနပွေတျသှားတယျဆိုတာ ခဈြစှဲ မုနျးစှဲ ကငျးတဲ့စိတျနဲ့ သသှေားတာပဲပေါ့… ဒါဆိုရငျအသလှေတဲ့ လူ.. ဖွဈသှားပွီ ။
ဒီတော့ သသေောအခါ ခဈြစှဲမုနျးစှဲ ကငျးဖို့အတှကျ နစေဉျမှာကတညျးက. ခဈြစှဲ မုနျးစှဲ ကငျးအောငျကွိုးစားကွရမယျ။
လိုရငျးကတော့.. ဒါန.. သီလ.. သမထ.. ဝိပဿ နာ ကုသိုလျ အာရုံတဈခုခု နဲ့နရေငျ ဒီအစှဲကကငျးသှားတာပါပဲ…။
နှာသီးဝ လထေိရာအရပျ သတိကပျပွီး ဝငျလေ ထှကျလေ ရဲ့ တိုးသဘော… ထိသဘောနဲ့. ပတျသကျဆကျစပျလာသမြှ ရုပျသဘော… နာမျသဘော… ဖွဈပကျြသဘောတှကေို ဉာဏျအဆငျ့အားလြှျောစှာ သိ..သိနမေယျဆိုရငျ ဘာခဈြစှဲ မုနျးစှဲမှ အစှဲနိုငျတော့ပါဘူး..။
အစှဲကငျးစတေဲ့ နညျးလမျးတှေ အားလုံးထဲမှာ ဝငျလေ ထှကျလေ ရီုမှတျမှု..(အာနာပါနကမ်မဋ်ဌာနျး. ) ဟာ အားအကိုးရဆုံး ပါပဲ..။
ပုဂ်ဂိုလျ သတ်တဝါ မပါ သဘောသကျသကျကိုသာ အာရုံပွုရလို့ပါ..။ ဝငျလေ ထှကျလရေဲ့ တိုးသဘော.. ထိသဘော.. အေးသဘော… နှေးသဘောဟာ ဘာမှ စှဲလမျးစရာ အကွောငျးမရှိဘူး..။
ကိုယျ့စိတျက ဘာဝနာ အာရုံတဈခုခုကို အမွဲဆှဲထားရမယျ… ဒါဆိုရငျ အဆှဲမွတျတာပေါ့.. တဈနညျးအားဖွငျ့ ကိုယျ့စိတျမှာ ဘာ အာရုံ ပျေါလာပျေါလာ ဘာဝနာတဈခုခု ဖွဈသှားအောငျ ဆှဲယူပဈလိုကျရမယျ..။ ဒါဆိုရငျလညျး.. အဆှဲမွတျတာပဲ..။
အဆှဲမွတျရငျ အစှဲပွတျပါတယျ ။ဘာဝနာ အဆှဲမွတျရငျပဲဖွဈဖွဈ … အာရုံအဆှဲမွတျရငျပဲဖွဈဖွဈ… ခဈြစှဲ.. မုနျးစှဲ အစှဲပွတျပါတယျ။
အစှဲကငျးရငျ အသကျရှငျစဉျမှာလညျး စိတျကွညျလငျပါတယျ..စိတျအေးခမျြးပါတယျ.. သပွေီးရငျလဲ ကောငျးရာ သုဂတိရောကျရတဲ့အတှကျ အသလှေပါတယျ ။
ရဟန်တာအဆငျ့ထိ အစှဲကငျးရငျတော့ နိဗ်ဗာနျ အပွီးရောကျပွီး အသလှေပါတယျ။
ဒီအရည်အသွေး လေးမျိုးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ကုသိုလ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်မှ ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်နိုင်မယ်…။
“မနေရလို့ သေရသောခါ..”ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပေါ့..
မနေရတော့တာကိုပဲ သေတယ်ပြောတယ်..။ နေတာရပ်သွားရင် သေတာပဲပေါ့..
အဲ့ဒီတော့ နေနေတုန်းမှာ ချစ်စွဲ မုန်းစွဲ ကင်းတဲ့စိတ်နဲ့ နေသွားမယ်ဆိုရင် နေတာလေး ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ ချစ်စွဲ မုန်းစွဲကင်းတဲ့ စိတ်နဲ့ပြတ်သွားမှာပေါ့..
ချစ်စွဲ မုန်းစွဲ ကင်းတဲ့စိတ်နဲ့ အနေပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ ချစ်စွဲ မုန်းစွဲ ကင်းတဲ့စိတ်နဲ့ သေသွားတာပဲပေါ့… ဒါဆိုရင်အသေလှတဲ့ လူ.. ဖြစ်သွားပြီ ။
ဒီတော့ သေသောအခါ ချစ်စွဲမုန်းစွဲ ကင်းဖို့အတွက် နေစဉ်မှာကတည်းက. ချစ်စွဲ မုန်းစွဲ ကင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်။
လိုရင်းကတော့.. ဒါန.. သီလ.. သမထ.. ၀ိပဿ နာ ကုသိုလ် အာရုံတစ်ခုခု နဲ့နေရင် ဒီအစွဲကကင်းသွားတာပါပဲ…။
နှာသီးဝ လေထိရာအရပ် သတိကပ်ပြီး ၀င်လေ ထွက်လေ ရဲ့ တိုးသဘော… ထိသဘောနဲ့. ပတ်သက်ဆက်စပ်လာသမျှ ရုပ်သဘော… နာမ်သဘော… ဖြစ်ပျက်သဘောတွေကို ဥာဏ်အဆင့်အားလျှော်စွာ သိ..သိနေမယ်ဆိုရင် ဘာချစ်စွဲ မုန်းစွဲမှ အစွဲနိုင်တော့ပါဘူး..။
အစွဲကင်းစေတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အားလုံးထဲမှာ ၀င်လေ ထွက်လေ ရီုမှတ်မှု..(အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်း. ) ဟာ အားအကိုးရဆုံး ပါပဲ..။
ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ မပါ သဘောသက်သက်ကိုသာ အာရုံပြုရလို့ပါ..။ ၀င်လေ ထွက်လေရဲ့ တိုးသဘော.. ထိသဘော.. အေးသဘော… နွေးသဘောဟာ ဘာမှ စွဲလမ်းစရာ အကြောင်းမရှိဘူး..။
ကိုယ့်စိတ်က ဘာဝနာ အာရုံတစ်ခုခုကို အမြဲဆွဲထားရမယ်… ဒါဆိုရင် အဆွဲမြတ်တာပေါ့.. တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်စိတ်မှာ ဘာ အာရုံ ပေါ်လာပေါ်လာ ဘာဝနာတစ်ခုခု ဖြစ်သွားအောင် ဆွဲယူပစ်လိုက်ရမယ်..။ ဒါဆိုရင်လည်း.. အဆွဲမြတ်တာပဲ..။
အဆွဲမြတ်ရင် အစွဲပြတ်ပါတယ် ။ဘာဝနာ အဆွဲမြတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် … အာရုံအဆွဲမြတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်… ချစ်စွဲ.. မုန်းစွဲ အစွဲပြတ်ပါတယ်။
အစွဲကင်းရင် အသက်ရှင်စဉ်မှာလည်း စိတ်ကြည်လင်ပါတယ်..စိတ်အေးချမ်းပါတယ်.. သေပြီးရင်လဲ ကောင်းရာ သုဂတိရောက်ရတဲ့အတွက် အသေလှပါတယ် ။
ရဟန္တာအဆင့်ထိ အစွဲကင်းရင်တော့ နိဗ္ဗာန် အပြီးရောက်ပြီး အသေလှပါတယ်။
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 16, Sayardaw Post navigation
မတ်ေတာ – ဆရာတျော ဦးဇောတိက (မဟာမွိုငျတောရ)